နွေရာသီ Sexy ကွေး Loving Ruching ရှေ့အဝါရောင် One Piece အမျိုးသမီးရေကူး ၀ တ်စုံ
နွေရာသီ Sexy Curve Luch Ruching ရှေ့အဝါရောင် One Piece အမျိုးသမီးရေကူး ၀ တ်စုံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Swimsuit သည် Curve-love ruching front နှင့်ထွန်းလင်းတောက်ပသည်။ ~ အလင်းပံ့ပိုးမှုနှင့်ပုံသဏ္forာန်အဘို့အ padding ဖုံး။
Vintage Inspired Swimsuit ~ အစာအိမ်နှင့်အူသိမ်အားပါးလွှာစေသည်။ ~ အရေပြားမဟုတ်ဘဲခါးဆစ်ပြသထားတယ်။
တစ်စုံတစ်ရာရေချိုးသည့်ဝတ်စုံ ~ Allover အမြင်အာရုံပါးလွှာနှင့်ဖုံးကွယ် shirring; ~ အပေါ်ဆွဲဆောင်; ပိတ်စရာမရှိ
ကမ်းခြေပေါ်ရှိအချိုဆုံးပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်ရေကူးဝတ်စုံတစ်မျိုး၊ အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာဖြင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံသဏ္withာန်နှင့်ကွေးမှုတိုင်းကိုလွင့်မျောသွားစေသောအလင်းရောင်။ ဒီအ ၀ တ်လျှော်ထားတဲ့ရေချိုးကန် ၀ တ်စုံကသင့်ဗီရိုကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းကသင့်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်၊
1. သင်မ ၀ ယ်ခင်အရွယ်အစားအသေးစိတ်ကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
၂.၃ လက်မအရွယ်အစားကွာခြားမှုကို ကျေးဇူးပြု၍ လက်စွဲဖြင့်တိုင်းတာပါ။
3. အကယ်၍ သင့်တွင်ကိုယ်ထည်ပိုရှည်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အရွယ်အစားတစ်ခုသို့တက်ရန်အကြံပေးလိုသည် (သင်ရေကူးဝတ်စုံတစ်ခုဝယ်ယူသောအခါ)
4. actural ပစ္စည်းများ၏အရောင်များသည်မတူညီသောမော်နီတာများကြောင့်ပုံများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်သည်။
၆။ ပစ္စည်းများကိုညင်ညင်သာသာရေအေးဖြင့်ဆေးကြောပြီးခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အရောင်ချွတ်။ မထားပါနှင့်။
ရှေ့သို့ Smooth High Cut ခြေထောက်ပြတ်သောထိုင်ခုံဖုံးလွှမ်းထားသည့်အမျိုးသမီး ၀ တ်ရေချိုးကန်တစ်ခု
နောက်တစ်ခု: Assorted အရောင်ဆန့်ကျင်ဘက်တီးရီးယားမိန်းကလေးအတွင်းခံအဝတ်အစားအကျဉ်း
ဆွဲယူနိုင်သော Pad Smooth One Piems Pin Up Swimsuit ...
လေ့ကျင့်ခန်း / ကြံ့ခိုင်ရေး One Size Fit Super Stretch L ...
စိတ်ကြိုက်အရောင်ဆန့်ကျင်သော static ပျော့ပျောင်းသော Breathable ...